galmudugnews.com » Topnews:- Shirkadda Somtel oo Internet-keeda ka xanibtay boqashada Website-yo taabacsan Khaatuma iyo Awdal State
Home » WARARKA » Topnews:- Shirkadda Somtel oo Internet-keeda ka xanibtay boqashada Website-yo taabacsan Khaatuma iyo Awdal State Topnews:- Shirkadda Somtel oo Internet-keeda ka xanibtay boqashada Website-yo taabacsan Khaatuma iyo Awdal State galmudug on
No Comment Views 16575
Shirkadda Internet-ka iyo telefoonada bixisa ee Somtel Dahabshiil Groups ayaa guud ahaan adeegeeda Internet-ka block ama xanibaad ka saartay Website-yada taabacsan Maamul goboleedyada Awdal State ,Khaatuma State iyo Galmudug State.
Inta la xaqiijiyay Somtel Somaliland waxay adeegeeda ka xanibtay 30Websites oo 16 ka mida yihiin kuwa taabacsan maamul goboleedka Khaatuma State of Somalia sida ay xaqiijiyeen tifaftirayaasha Website-yada iyo wariyeyaasha jooga Buhodle.
Tifaftiraha Website-ka Afbakayle Mr Cadnaan Saalax oo Warbaahinta la hadlayay ayaa yiri ” Internet-ka somtel Laascaano iyo Buhodle lagama booqan karo dhamaan lix iyo tobanka Website ee Khaatuma state,sidoo kale lagama booqan karo Website-yada aan kuu sheegay sida Sunatimes iyo Waagacusub laakiin qaar ka mida website-yada waxaan ka geli karnaa kaliya Telesom internet”
Tifaftirayaasha Kalshaale.com Xamse Xasan iyo Boocame.com Axmed Darwiish ayaa shirkadda Dhiigshiil ku eedeeyay inay fulineyso siyaasadda maamulka beeshooda ee Ahmed Siilaanyo.
Website-yada Khaatuma State taabacsan ayaa Internet-ka Somtel looga xanibay inay bulshada akhrisan warbixinadooda khaatumeysan,waxayna kala yihiin
Isgaarsiinta Somtel oo hoos tagta Shirkadda Dahabshiil Groups waxay sidoo kale Block saareen Website-yada taabacsan Maamul goboleedka Awdal State kuwaas oo kala ah.
Isgaarsiinta Dahabshiil ee Somtel Somaliland waxay hore u xanibtay booqashada Website-yada Galmudug State iyo kuwa madaxbanaan waxayna kala yihiin.
Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ASOJ ayaa Shirkadda Dahabshiil ku eedeeyay inay dagaal xoogan kula jirta madaxbanaanida Saxaafadda ku hadasha afka Somaliga.
“Dahabshiil Groups waxay laba laabtay caburinta Saxaafadda madaxabanaan ee Somalia sidaas darteed waxaanu ku guda jirnaa dacwad Caalamiya taas loo gudbiyay Qaramadda Midoobay waaxda qaabilsan ilaalinta xoriyada Saxaafadda madaxabanaan”ayey tiri Xoghayaha guud ee ASSOCIATED SOMALI JOURNALISTS Mrs Fadumo Farah.
Fadlan hadii aad tahay Wariye caburin ama tacadi kala kulmay Dahabshiil Groups la xiriir info@asoj.org.
Topnews:- Shirkadda Somtel oo Internet-keeda ka xanibtay boqashada Website-yo taabacsan Khaatuma iyo Awdal State
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21017 hitsContact US - 19678 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15772 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15331 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13949 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13893 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13821 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13558 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11800 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11792 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11738 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11529 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11507 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11361 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11222 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11171 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11062 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11056 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10812 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10407 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10357 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10311 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10022 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9996 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9787 hits Home About